Official: Ethiopia’s latest airstrike hits Tigray university - Kichuu
HomeNewsAfricaOfficial: Ethiopia’s latest airstrike hits Tigray university
Riphee lola caalaa kan dhugaaf falmatu hin jiru !!
Riphee lolan yoo angoo qabate Dimokratwaa hin ta’uu theory ykn oduun deemu100% kijiba. 1. Riphee lola dimokratawaa hin ta;uu kan jeedhu ragan sayaansi siyaasa kami iyuu keesa kan mirkanesu hin jiru. 2. Ogannoon riphee lola walala dha akka hin jeenef warri ummata koon bilisomsa jeedhan bosona warii seenan seena keesati warra hunda caalaa qarroo ta’an dha fkn miseensoon WBO Baroo Tumsa, Elemo, Magarsa fi Abboommaa kkf kasse hanga Marroo fi Goolcha,Dr.Tolasa Shanqoo Bilisumaa fi jaal Gadisa dabalate warra qaroo wara barate fi miseensoota paarlamaa warra turan dimokerasi enyuu caalaa warra beekan dha. 3. Nami lolaf bosona seene nama of du’ee lammii isaa bilisa basuuf bosona deeme malee nami dictatera tayee lammii isaa midhuuf bosona deeme hin du’uu
4. Hara warrii kaayyoo saba oromooti ciicichan dhugaafi falmatan hidha keesati dararama jira waraa umurii isaa bosonati dabarsan dha Abdi Ragassanfaa
5. Warrii riphee lolan dimocratawwa hin ta’uu jeedhan USA, Kanda, Austeralia fi Europe irra galan Akktvustoon diaspora hara isaantu Dictatera tayee Abiyi Dictatetaf ergamee Oromoo fixaa jira. Ummata Hararge Buraayuu fi Wallaga irrati duguga sanyii baleesa warrii gegesa jira PP akktvistoota Diaspora dha. 6. Kufati EPRDF booda ABO angoo akka hin qabnaee goochu irrati hojeechu qabna jeedhan warri mootuumaa USA waga 8 gorsa turan akktvistoon biyya galan WBO hikkachisu fi qabsoo qeerroo Abiyi lachun bala Oromoo baleesuf deemu kanaaf warrii nu saxilaan riphee lola utuu hin tane akktvisttota Diaspora dha. 7. Riphee lola gargaruuf ulaga lafa kawwavhu qabna jeechi jeedhu dogogora qoofa utuu hin tane yakka sababin isaa leencaa harka isaa qulaa bosona seene diina irraa meesha fudhate bilisummaa fi wallabummaa uumata isaaf loluf diasporan ulagaa bsleesuuf hamilee fi dandeeti tokko ilee hin qabdu. Jeechs Ayetu Baro Tumsa tokkon xummuruuf “ani utuu WBOf waan feedhe goodhe gababasas gaafachuu mirga fi hamilee tokko ilee irrati hin qabu” jeete. Kan Dollara 10 waga dura keene ama yoona Bilisummaa ture jeedhu ilee nan beeka Oromoon WBO malaaqan gargaruu dabalate waan danda’uun irrati hirmachuu qaba Diasporan ogummaa lola qabu galee itti makamuu qaba.
Dr Betachew Bejigi Demeksatin
በመቀሌ ዩንቨርስቲ በአንደኛው ካምፓስ የተማርዎች መመገብያ ካፌ ላይ በጦር ጄት በጣለው ቦምብ ተማሪዎች ላይ ከከባድ እስከ ቀላል ጉዳት ደርሷል። ጦርነቱ በህዝብ ላይ ነው ስንል በምክንያትነት ነው።